Umzekelo weProjekthi yeZenzululwazi yeZenzululwazi
Ipapasho yeProjekthi yeProjekthi yeSayensi
Iprojekti efanelekileyo yeprojekthi yezithuba zepowusta ziqulethwe ziinkalo ezintathu zetekisi kunye nemifanekiso. Todd Helmenstine
Lo ngumzekelo wendlela onokuyilungisa ngayo ipowusta yeprojekthi yesigxina sezesayensi ukubonisa ngokucacileyo indlela osebenzisa ngayo indlela yesayensi yeprojekthi yakho. Iibhodi zepowusta zokubamba ipaneli zintathu zifumaneka ngokubanzi apho iindawo zesikolo zifumaneka khona.
Isihloko kufuneka sibe yinkcazelo echanekileyo yeprojekthi. Isihloko sihlala sisisiseko esiphambili kwiposter.
Zama ukufaka iifoto zemibala yeprojekthi yakho, iisampuli ezivela kwiprojekthi, iitafile kunye negrafu.
Intshayelelo kunye nenjongo
Ngamanye amaxesha eli candelo libizwa ngokuthi 'Imvelaphi.' Eli candelo lichaza isihloko seprojekthi, ichaza umdla wakho kwiprojekthi, kwaye ichaza injongo yeprojekthi.
I-Hypothesis okanye umbuzo
Chaza ngokucacileyo i-hypothesis yakho okanye umbuzo.
Bhala uluhlu lwempahla oyisebenzisileyo kwiprojekthi yakho kwaye uchaze inkqubo oye wasebenzisa ngayo ukwenza le projekthi. Ukuba unesithombe okanye umzobo weprojekthi yakho, le yindawo enhle ukuyifaka.
Iinkcukacha kunye neziphumo
Idata kunye neziphumo azikho izinto ezifanayo. Idatha ibhekisele kumanani okwenyani okanye enye inkcazelo oyifumene kwiprojekthi yakho. Idatha idlalwa kwitafile okanye kwigrafu. Icandelo leZiphumo lichaza ukuba lithetha ntoni idatha.
Isiphetho sigxile kwi-hypothesis okanye umbuzo njengoko kuthelekiswa nedata kunye neziphumo. Yayiyiphi impendulo yombuzo? Ingaba i-hypothesis yaxhaswa? Yintoni oyifumeneyo evela kuvavanyo ?
Unokudinga ukukhankanya izikhokelo okanye unikezele i-bibliography yeprojekthi yakho. Iingqinisiso zingachazwa kwi-post okanye ziprintwe kwaye zifakwe ngaphantsi kweposta.
Uku landela le nyathelo kunokukunceda ukuba wenze iphosta yesalathisi ekhangayo. Bonisa inzululwazi yakho!
Ukusetyenziswa kwePhepha leProjekthi yeSayensi zeNzululwazi
Khanyisa kwi-Duck Tape Triboluminescence
I-Green Fire i-Jack Jack-o-Lantern
Indlela yokuKhula i-Sodium Nitrate Crystals
Amakhaya ama-10 aphezulu kwihlabathi
Ziziphi iintlobo zeZixhobo kunye nezixhobo ezenziwe ngabaGladiators?
Ukuhlukana phakathi kwe-Shanghainese kunye nesiMandarin
Ukusebenzisa uLuhlu olubanzi lweSigama - iSicwangciso soSifundo se-ESL
UNH GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Iingcaphuno zokuxabisa Ukunceda ubuhlobo